धुर्कोटको घुम्ती शिविर, नागरिकलाई घरदैलोमै सेवा (फोटो फिचर ) - Gulminews
२०७८ कार्तिक ३०, २१:०४
जिल्ला समाचार, फोटो फिचर
गुल्मी, ३० कार्तिक । धुर्कोट गाउँपालिकाले नागरिकलाई घरदैलोमै सेवा दिने उदेश्यले घुम्ती शिविर संचालन गरेको छ ।
मंगलबार धुर्कोट गाउँपालिका वडा नं. १ नयागाउँ स्थित नयागाउँ स्वास्थ्य चौकीको प्रांगणमा एकिकृत घुम्ती शिविर संचालन गरिएको थियो । शिविरमा गाउँपालिका अन्तरगतका विभिन्न शाखाबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य, कृषि, पशु, जेष्ठ नागरीक, अपांग लगायत बैकिङ्ग सेवा समेत उपलब्ध गराइएको थियो ।
२ सय १० जनालाई नि:शुल्क स्वास्थ्य परिक्षण तथा औषधी वितरण गरिएको छ। जसमा ६० जनाले भिडियो एक्सरे सेवा लिएका छन । त्यस्तै पशु शेवा अन्तर्गत २ सय २ परिवारका १ हजार ८९ बाख्रा र ६७ भैसीलाई औषधी वितरण, ७० बाख्रा र ३५ गाई भैसीको गोवर परिक्षण गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कासिराम पन्थीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै कृषि, पशु फर्म र पसल नविकरण ९ र ५ वटा नयाँ दर्ता समेत गरिएको छ। शिविरमा १ सय ५८ जना जेष्ठ नागरिकहरुलाई जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण गरिएको पन्थीले बताए । बैकिड्ड सेवा अन्तर्गत सनराईज बैँक धुर्कोट शाखाले दिएको सेवामा २३ जनाले नयाँ खाता खोलेका छन ।
शिविरमा धुर्कोट गाउँपालिका अध्यक्ष भुपाल पोखरेल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशीराम पन्थी, वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष कमल थापा, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार लागायतका व्यक्तित्वहरुको उपस्थिती रहेको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष पोख्रेलले अवस्था र भूगोल हेरेर आवश्यक स्थानमा शिबिर संचालन गरिने बताए ।